Gore reSocial Bhizinesi Diki | Martech Zone
Pese pandinonzwa kuti mumwe munhu arikutanga bhizinesi kana kuti vane ravo bhizinesi diki, ini ndinobva ndavaremekedza. Mabhizimusi madiki anoita huwandu hwenzvimbo yedu yekuwedzera uye isu tese tinoshanda nesimba kusimudza mumwe mugungwa rema goliath. Ini ndinowanzo tendera pamabhizinesi madiki zvakanyanya nekuti mutengi wese kiyi mutengi ... hazvisi zvekungovimbisa, ichokwadi. Mabhizimusi madiki ari kutendeukira kunetiweki dzekudyidzana zvakanyanya nekuzendamira pamambure avo, tsvaga vatengi vatsva, dzidza nezveindasitiri yavo, chiremera chekusimbisa. LinkedIn inzvimbo yepakati yezviitiko izvi.
Iwe unogona kushamisika nezvakawanikwa neLinkedIn: 94% yevakabvunzurudzwa vakapindura avo vanoshandisa vezvenhau vakati vanoishandisa kushambadzira, uye vatatu muvashanu vanoti kugarisana kwevanhu padambudziko rekutanga rekukwezva vatengi vatsva. Kune hyper makambani ekukura, zvemagariro midhiya zvakatonyanya kukosha. Ivo vanoisa mari mune zvemagariro enhau kupfuura chero imwe chiteshi, uye vanobvuma kuti inoshanda zvakanyanya pakuzadzisa zvinangwa zvekushambadzira senge kumaki, kushambadzira zvemukati, uye kutungamira chizvarwa.
kushanya LinkedIn's nyowani nyowani bhizinesi microsite kudzidza zvakawanda nezvekuti LinkedIn inogona sei kukubatsira iwe kuzadzisa ako akasarudzika mabhizinesi zvinangwa kuburikidza nesocial media.
Tags: LinkedIndiki bizBhizinesi dukusmb
Mar 10, 2014 pa 8: 02 AM
Chaizvoizvo chinodzidzisa uye chinonakidza post. Iwe wakawedzera ruzivo rwakawanda mu blog yako. Ndinotenda ne
kugovana ruzivo rwakakosha urwu.